स्कूलहरू बन्द गर्न शिक्षा मन्त्रालय किन हच्केको ? | हिमालयन ट्रिबुन
HT २०७८ बैशाख १, बुधबार २३:१३
निजी र आवासीय विद्यालयको व्यवसायिक स्वार्थमा सरकार, शिक्षक र विद्यार्थी र अभिभावकहरूका संस्थाका नेतृत्वको पनि स्वार्थ जोडिएको हो ?
स्कूलमा पढ्ने विद्यार्थीहरू व्यापकरूपमा कोरोना संक्रमित भएका र कसैको दुःखद मृत्यु भएको समेत समाचार आइरहेका छन् । कोरोना महामारीको यो त्राषद चरणमा पनि शिक्षा व्यापारी र व्यवसायीहरूको आर्थिक स्वार्थको हिसाब कितावको साझेदारीका कारण स्कूलहरू बन्द गर्न सरकार र शिक्षा मन्त्रालय हच्केको हो ? अनि शिक्षक सङ्घ, संगठन, महासङ्घ र विद्यार्थी र अभिभावक संगठनहरूको चन्दा तथा अन्य स्वार्थले उनीहरूलाई पनि किचेको र थिचेको हो ?
उनीहरूका पनि र उनका दलका मालिकका पनि निजी तथा आवासीय विद्यालयहरू छन् क्यारे, त्यसैले नबोलेका हुन् कि ? उनीहरूलाई राजनीति धान्न पनि त्यस्ता विद्यालयहरू खोलिएका छन् क्यारे । वा उनीहरूले मैले नसुनेको –नपढेको पो हो कि ? मैले नसुनेको–नपढेको भए क्षमा चाहन्छु । पेट्रोलमा ६० पैसा बढ्दा सडक आन्दोलनमा जाने, र निजी स्कूलमा २०–३० रुपैयाँ वृद्धि गर्दा सडकमा टायर बाल्ने विद्यार्थी संगठनहरू निजी स्कूलमा पढ्ने बालबालिका र किशोर किशोरीहरूको जीवनको सवालमा यस्तो रहस्यपूर्ण मौनता ? अनि अभिभावक संगठनहरू ? उनीहरू शायद विद्यार्थीहरूका अभिभावकहरूका प्रतिनिधि संस्था नभएर निजी र आवासीय विद्यालयका मालिकहरूका अभिभावक संगठन हुन् ।
Spread the loveकाठमाडौं । निर्वाचन आयोगले नेपाली नागरिकता प्राप्त गरेर पनि मतदाता नामावलीमा नाम दर्ता गर्न बाँकी व्यक्तिलाई जिल्ला निर्वाचन कार्यालयमा गई फोटोसहितको मतदाता नामावलीमा नाम दर्ता गराउन अनुरोध गरेको छ । नयाँ वर्ष २०७८ का अवसरमा समस्त मतदातामा शुुभकामना व्यक्त गर्दै आयोगले नागरिकता प्राप्त गर्नासाथ निर्वाचन कार्यालयमा गई फोटोसहितको […]